नव दम्पती हुनुहुन्छ ? नवजात शिशुको लागि निम्न कुरामा ख्याल राखौँ – सुदूर दर्पण
नव दम्पती हुनुहुन्छ ? नवजात शिशुको लागि निम्न कुरामा ख्याल राखौँ
श्रावण १५ गते । नव दम्पती हुनुहुन्छ र पहिलो सन्तान हुर्काउदै हुनुहुन्छ भने, धेरै कुरामा तपाईंहरु अनभिज्ञ हुनुहुन्छ । शिशुलाई कसरी स्तनपान गराउने, कसरी नुहाइदिने, कसरी दिसा–पिसाब गरेको थाहा पाउने ? इत्यादि । धेरै दम्पतीलाई पहिलो शिशु हुर्काउन केही गाह्रो हुन्छ । उनीहरुसँग पर्याप्त अनुभव हुँदैन । त्यसैले शिशुलाई कुन अवस्थामा कस्तो स्यहार गर्ने भन्ने बुझ्न जरुरी हुन्छ ।
भर्खर जन्मिएको बच्चालाई पर्याप्त निन्द्रा चाहिन्छ । उनीहरु एक दिनमा १६ घण्टासम्म आरम गर्न सक्छन् । तर, यत्तिका समयसम्म उनीहरु खाली पेट बस्न सक्दैनन् । तरल पदार्थले पेट भर्नुपर्ने हुँदा बारम्बार भोग लागिरहन्छ । जब पेट खाली हुन्छ, उनीहरु ब्यूँझन्छन् । त्यसैले बच्चालाई स्तनपान गराइरहनुपर्छ । यसका लागि आमाले पोषिलो वा झोलयुक्त खानेकुरा बढी नै सेवन गर्नुपर्छ ।
वाहिरको चिसोले चाडै प्रभावित बनाउने हुँदा बच्चाको कोठाको तापमान मिलाउनुपर्छ । यद्यपी बच्चालाई न्यानो बनाउने चक्करमा धेरै गुम्साएर राख्नु हुँदैन । उनीहरुको छाला एकदमै संवेदनशिल हुने भएकाले वाह्य वातावरणले तुरुन्तै असर गर्न सक्छ ।
पहिलो बच्चालाई स्तनपान गराउन कतिका लागि समस्या हुन्छ । अनुभव पनि हुँदैन । बच्चा जन्मिएपछिको २४ घण्टासम्म उनलाई ८ देखि १२ पटकसम्म स्तनपान गराउनुपर्छ । स्तनपान गराउने आमाले पनि सन्तुलित खाना खानुपर्छ । बच्चालाई छातीमा राखेर निप्पललाई ओंठमा स्पर्श गराउनुपर्छ । बच्चाले मुख खोलेपछि विस्तारै स्तन दबाउनुपर्छ । बच्चाले राम्ररी दुध चुस्न सकेन भने विस्तारै अभ्यस्त गराउनु पर्छ ।
शिशुलाई भोग लागिरहन्छ । साथै दिसापिसाब पनि गरिरहन्छ । दिसा पिसाब गरेपछि बच्चाको कपडा परिवर्तन गरिहाल्नुपर्छ । एक दिनमा ६–८ वटा डाइपर परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । दिशा गरेको अवस्थामा मनतातो पानी कपासमा डुबाउँदै सफा गरिदिनुपर्छ । बच्चालाई दिनमा केहि घण्टा डायपर बिना नै रहन दिनुपर्छ ।
नवजात शिशुको सरसफाईमा विशेष ख्याल गर्नुपर्छ । नुहाइदिन गाह्रो हुन्छ । बच्चा जन्मिएको पहिलो साता स्पन्जले बिस्तारै उसको शरीर सफा गरिदिनुपर्छ । एकपटक गर्भनाल निस्किएपछि नियमित रुपले हप्तामा दुई पटक वा तीन पटक नुहाइदिनुपर्छ । नुहाइदिनका लागि तातो पानी प्रयोग गर्नुपर्छ । अनलाइनखबर बाट
आज विश्व बाघ दिवस,बाघ संरक्षणमा उत्साहजनक उपलब्धि
पहिरोले अछामका ग्रामीण सडक अवरुद्ध,नागरीकलाई सास्ती